Umphumo wokuChwetheza ngomsi ngeFotohop ngokukhawuleza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuchwetheza ukusebenza komsi nge Photoshop baya kufumana i- into enomtsalane onokuyisebenzisa kwezi zibhalo zifuna olu hlobo. Kwezinye iiprojekthi zemizobo kuya kufuneka sisebenzise ezahlukileyo Iziphumo zokuchwetheza Ukuphucula ngcono umyalezo obonakalayo, yiyo loo nto iibrashi zinamandla umanyano lwabo bonke abayili. Uya kufunda ukusebenzisa iibrashi ngendlela ebonakalayo ukuze ufezekise fusion eyiyo phakathi kwesiphumo kunye nokuchwetheza.
Iibrashi Photoshop bafana ne- umlingo wand oko kusinceda ukuba sisebenze ngokukhawuleza xa sifuna ukwenza iziphumo ezithile, ziyinyani ngokude sikwazi ukuba singazilawula njani ngokuchanekileyo ukuze sifezekise ubunyani obukhulu. Kule meko siza kufunda ukusebenza ngebrashi yesitayile sokutshaya ukuyifaka kwindawo yokubhalela ukuze sifezekise isiphumo Ukuchwetheza
Ukufezekisa oku, into yokuqala esiyifunayo kukuba nebrashi eyenza ifayile ukusebenza komsi, singayenza le nto khuphela de Internet mahhala.
Eyona ndlela ifanelekileyo yokufumana isiphumo sokusebenza ngenene indlela yokunxibelelana kukuyisebenzisa kuyilo apho isiphumo esithile siyimfuneko, yimpazamo exhaphakileyo ukufaka iimpembelelo kwiifonti ngokungenamkhethe ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwengcinga.
1 Khuphela ibrashi yesiphumo somsi
2 Bhala isicatshulwa
3 Sebenzisa ibrashi yesiphumo somsi
3.1 Iiparamitha zebrashi
3.2 Guqula ifonti
Khuphela ibrashi yesiphumo somsi
Into yokuqala ekufuneka siyenzile khuphela ibrashi ukusebenza komsi, ngenxa yoku singena kwiwebhu kwaye ucofe i Ukukhuphela, siya kukhuphela ngokuzenzekelayo ifayile ecinezelweyo ekufuneka siyivulile kwaye siyivule ukuze sikwazi ukuyisebenzisa Photoshop, Emva kweli nyathelo ibrashi kufanele ukuba sele ikule yethu ikhathalogu yeebrashi.
Into elandelayo ekufuneka siyenzile bhala isicatshulwa Apho sifuna ukufaka khona iziphumo zethu, kule meko sibhale igama IBurger ukuyidibanisa kancinci nomxholo wokutya. Ifonti esiyisebenzisayo isimahla, sinokuyisebenzisa naluphi na uhlobo lochwethezo leyo inomdla kuthi.
Ukubhala isicatshulwa, into ekufuneka siyenzile kukukhetha i Isixhobo sokubhaliweyo kwibar esecaleni yezixhobo Photoshop. Sijonge ifonti enomdla kuthi kwaye sibhala isicatshulwa naye.
Sebenzisa ibrashi yesiphumo somsi
Sivula isixhobo sebrashi kwaye sijonge ibrashi yethu yesiphumo somsi. Kweli nqanaba kufuneka sijonge kuthotho lweeparameter ezisisiseko kwisixhobo sebrashi ukuze sikwazi ukusilawula ngokuchanekileyo.
Ezi zi iindlela ezisisiseko ukuba kufuneka silawule ukuqinisekisa ukuba isiphumo sethu sifikelela kwisiphumo esisifunayo. Okokuqala ubungakanani bebrashi Iya kusinceda ukuba siqambe ngokuchanekileyo isiphumo sethu sokuyihlengahlengisa. Inkqubo ye- ukukhanya kunye nokuhamba Bayasivumela ukuba sihlengahlengise inqanaba lokubonakala kwesiphumo ukuze siyenze icace gca. Inkqubo ye- umbala ivumela ukuba sitshintshe ithoni yomsi enokwahluka ngokuxhomekeke kwinto esiyifunayo.
Xa sicacile malunga nendlela yokulawula ibrashi kancinci, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukuqala yisebenzise kwisicatshulwa kuyilwa umaleko omtsha ongenanto kwaye ulibeka ngaphezulu kocwangco lobhalo lwantlandlolo, eli nyathelo alikho simahla kuba ngamnye kuthi uya kujonga isiphumo esithile. Ngokufanelekileyo, ukufumana isiphumo esisebenzayo khangela iimbekiselo en Internet ukubona ngaphezulu okanye ngaphantsi ukuba umsi wokwenene unjani.
Ukuba sifuna ukulungelelanisa ngcono ibrashi esinokuyenza tshintsha indlela oqhele ngayo Ngokucofa ukhetho esilubonayo oluphawulwe kwifoto ephezulu, olu khetho lumnandi ukunika amandla kwisiphumo kuba siyasivumela tshintsha ukuthambeka kwakho.
Into elandelayo esinokuyenza ukwenza ukuba isiphumo sibe nokubamba okungokoqobo kunye nokupholileyo kukususa ubuchwephesha kancinane linganisa loo fusion ngomsi, le yinto esiya kuyenza kuphela ukuba sijongile. Into yokuqala esiza kuyenza yile rasterize umaleko typographic yentsusa ngokunqakraza kuyo ngeqhosha lasekunene le mouse kwaye ukhethe ukhetho rasterize maleko.
Into elandelayo esiza kuyenza yile yenza imaski yomaleko kumaleko wethu wokubhaliweyo kwaye ngoncedo lwebrashi yokutshintsha iiparameter ukuyenza igude kakhulu siqala cima imimandla typography.
Kancinci siyacima Inxalenye yokuchwetheza de siphumelele kwisiphumo esasikukhangele. Ukuba sifuna ukwenza imaski yokwaleka komsi kunye nokucima iindawo ze imilo egudileyo ukulinganisa ubunyani obukhulu.
Kwimizuzu nje embalwa siphumelele Iziphumo ezinomdla kuhlobo lwethu lokuchwetheza, kulo mzekelo umphumo uyamangalisa kodwa unokuthanjiswa kwaye uhlengahlengiswe kwiimfuno zethu. Iibrashi Photoshop Bayasinika amathuba amaninzi xa uyila.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Umphumo wokutshaya ubuchwephesha ngeFotohop
Isiphumo sokuzonwabisa ngeFotohop ukwenza iintloko ezinkulu